I. Ny Sinaody: ny Fianakaviana sy ny Fitoriana ny Vaovao Mahafaly – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Ankehitriny, dia miseho lany ireo toe-java-manahirana tsy fahita hatramin’ireto taona faramparany ireto, hatramin’ny niparitahan’ny fiarahana ao anatin’ny firaisana malalaka tsy fehezin-dalàna, tsy manapa-kevitra ny hivady akory, torak’izany koa hatramin’ny fanambadian’ny lahy samy lahy na vavy samy vavy, arahina firaisana tsikombakomba hanangan-jaza. Fa anisan’ireo toe-java-baovao mila ny fiahiana sy ny fandraisana andraikitra pastôralin’ny Fiangonana dia hampahatsiahivina eto : ny fanambadian’ny samihafa finoana, ny fanambadian’ny samihafa antokom-pivavahana, ny fianakaviana tsy hita reny na tsy hita ray, ny fampirafesana, ny fanambadiana amboarina miaraka @ olana mety ateraky ny vodiondry izay mety hifangaro amin’ny vola hividianana an-dravehivavy, ireo fombafomba ao amin’ny foko amam-pirazanana samihafa; ny kolontsaina zary enti-mitaiza ny fisalasalana hirotsaka handray ny andraikitra maha-ray na maha-reny manozongozona ny fahamarinan-toeran’ny fatoram-panambadiana; eo koa ireo hamboina ho fanafahana ny vehivavy izay matetika hampifandrafiana amin’ny fiainam-piangonana; torak’izany koa ireo trangana fifindra-monina izay hampifandraisina amin’ny fanovàna endrika mihitsy ny atao hoe fiainam-pianakaviana; fa eo ihany koa ity toe-tsaina bemiray mivoy ny marimaritra iraisana mifangaro amin’ny famelana ny hoe “izay mety amin’ny tsirairay” eo amin’ny fiheverana ny fanambadiana; fa ao ihany koa ny fiantraikan’ireny fironan-kevitra voizin’ny haino aman-jery eo amin’ny kolon-tsaina itaizana ny sarababem-bahoaka momba ny fihetsiketsehana manodidina ny fampakaram-bady sy ny ho fiainam-pianakaviana aterany; jerena ihany koa ireny fironan-kevitra misoko mangina any amin’ny sehatry ny fanaovan-dalàna izay mampietry ny lanjan’ny faharetana sy ny tsy fivadihana amin’ny teny fifamatoran’ny mpivady ireny; torak’izany koa ny fihanaky ny fisian’ny reny mpikarama amin’ny fitondrana vohoka (mampanofa tranon-jaza); ny fandikana na fomba famakiana amin’ny fomba vaovao manodoka ny zon’olombelona. Fa indrindra indrindra izay mitranga eo anivon’ny tontolon’ny fiangonana mihitsy, dia ny fihenan’ny finoana na fandaozana mihitsy ny fiaikena ny maha-sakramenta (famantarana hita maso na ren’ny vatana naorin’i Jesoa-Kristy manambara sy mampahazo fahasoavana) ny fanambadiana ary ny hery fanasitranana omen’ny fivalozana ara-tsakramenta.
Eo anatrehan’izany rehetra izany, dia azo lazaina tsara fa maika ny tokony hiahian’ny fivondronam-ben’ny eveka eran-tany “cum et sub Petro” an”izay fanamby aterany. Raha toa fotsiny ohatra, ka dinihina fa ankizy sy tanora maro no tsy hahita ny ray aman-dreniny ho afaka mandray sakramenta, ary dia ho azo ny maha-maika ny hamahana ny fanamby mipetraka eo amin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly eo anivon’ny vanin’andro ankehitriny, izay heverina ho toy ny “tanàna lehibe tokana izao tontolo izao”. Tena heno mihitsy ny akon’izany amin’izao androntsika izao rahefa mandinika ny fandraisan’ny olona maro maratra ao am-po ny fampianarana momba ny famindram-pon’Andriamanitra eo amin’ny tontolom-piainana andavanandro: ny fanantenana entin’ny safidy pastôraly hiahy manokana ny fianakaviana, araka izany, dia tena midadasika. Noho izany ny fandinihina ataon’ny Sinaodin’ny Eveka momba io lohahevitra io dia hita fa sady tena ilaina no maika ary ara-drariny heverina ho fanehoana ny fitiavan’ny mpiandry ondry miahy ny andian’ondry nankinina taminy sy ny fianakavian’olombelona manontolo mihitsy.